ओलीजीले देश बनाउनु हुन्छ: भद्र कुमारी घले — newsclubnepal.com
आज : २०७८ बैशाख ६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
न्यूज क्लब संवाददाता प्रकाशित : २०७५/५/१३ गते
पंचायती व्यबस्थाको शुरुवातदेखि पंचायतको उत्कर्ष र अवसानको साक्षी हुन्- सुश्री भद्रकुमारी घले ।
जुद्ध शमशेरकी छोरी कमल राणालाई समेत माननीयको चुनावमा पराजित गरेर पंचायती ब्यबस्थामा चार चार पटक माननीय भएकी उनी सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रीमंडलमा श्रम तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री समेत भएकी थिईन ।
राज्यसभा स्थायी समितिकी सदस्य समेत भएकी घले तत्कालीन राजनीतिमा एक चर्चित नाम हुन् । २०४६ सालपछि राजनीतिलाई चटक्कै छाडेर समाज सेवा र साहित्यतर्फ डोरिएकी उनी आजपर्यन्त यही बाटोमा हिडिरहेकी छिन ।
चुनावताका ओलीजीले जनतालाई दिएको आश्वाशन उहाँलाई जनताले पूरा गर्न दिनु परेन ? पूरा गर्न दिए न गर्ने हो ? देश बनाउने युवाहरुले त प्रधानमन्त्री सामुं गएर भन्नु पर्यो ल भन्नुस देश बनाउन हामीलाई के काम दिनु हुन्छ भनेर । कमसे कम सरकारलाई पांच बर्ष त काम गर्न दिनु पर्यो नि । देश बनाउनु भनेको दालभात, तरकारी पकाएजस्तो हो र ? दालभात पकाउन त् दुई घण्टा तीन घण्टा लाग्छभने चुट्कीको भरमा देश बन्छ ? सरकारलाई काम गर्ने दिईएको छैन, नत्र ओलीजीले देश बनाएर देखाई दिनु हुन्छ । मलाई पूरा विश्वाश छ, त्यत्ति गरेनन भने ती नेता नै हैनन् । हैनभने तिनले चौध बर्ष जेल बसेको त धिक्कार हुन्छ । यदि यिनले पनि गरेर देखाउनु सकेनन भने यो देश बन्दैन ।स्वदेशनेपाल डटकमबाट